उपत्यकाको आकाशमा देखियो अनौठो दृश्य, सर्वसाधारणले भने कतै अनिष्ट त होइन ? (भिडियोसहित) – NepalajaMedia
August 6, 2020 266
काठमाडौँ। मंगलबार साउन २० गते मंगलबार साँझ काठमाडौंको दक्षिणी आकाशमा लगातार जसो अनौठो दृष्य देखियो । आकाशमा देखिरहेको मल्याक मिलिक देख्दा मानिसहरुले सोचे कतै चट्याङ पर्दैछ ।मौसस पूर्वानुमानको सूचना अनुसार न्यूनचापीय रेखा नेपालबाट दक्षिणतिर सरेको थियो । जसका कारण ठूलो बर्षा, झरी पर्ने कुनै लक्षण भने थिएन ।
तर निरन्तर आकाशमा चारैतिर पालैपालो चम्किरहेको बिजुलीले न चट्याङ पार्यो । न त कुनै गड्याङगुडुङको आवाज नै आयो । दिनभर घाम लागेर खुलेको आकाशमा साँझ यस्तो दृष्य देखेपछि धेरैमा कौतुहलता जाग्यो । के भइरहेछ आकाशमा ।सँधै त यस्तो देखिदैनथियो । नेपालको आकाशभर नै यस्तो दृष्य देखेपछि धेरैले के भएको भनेर एक–अर्कासँग सोधे । म्यासेज पठाए यता यस्तो भइरहेछ , त्यता के छ भनेर सोधखोज समेत गरे । विदेशबाट अन्य मुलुकले रातमा फाइटर प्लेन पो पठाए कि भनेर धेरैले आंकलन पनि गरे ।
यस्तो किन भयो भन्ने सवालमा चट्याङविद् श्रीराम शर्माले कौतुहलता मेटाउँदै यो एउटा बादलभित्रको आन्तरिक संघर्ष भएको जवाफ दिनुभयो । मंगलबार आकाशमा देखिएको त्यो बिजुली चम्काइ बादलभित्रै चट्याङ पर्दाको अवस्था रहेको उहाँले प्रष्ट्याउनुभयो । यसलाई ‘स्पाइडर लाइटनिङ’ भनिन्छ । यो यदाकदामात्र देखिन्छ ।
उहाँका अनुसार मनसुन सक्रिय रहँदा गर्मीको मौसम भए पनि विगत एक महिनायता शितल महसुस गरिएको थियो । गर्मीको समयमा हुने उच्च तापक्रमको अनुभूतिलाई साउने झरीले बिर्साइदिएको थियो । जमिनमा चिसो र हावामा समेत जलवाष्प कायमै रहेका बेला मंगलबार अचानक बिहानैदेखि चर्को घाम लाग्यो । यसले वायुमण्डलमा सापेक्षित आद्रता अर्थात ह्युमिडिटी बढायो ।
ह्युमिडिटी बढेपछि जलवाष्प र हावामा रहेका पानीका कण उड्दै माथिल्लो वायुमण्डलमा पुग्न थाले । दिनभरको सूर्यको किरणको राप जमिनमा परिरहँदा मानिसले चर्को गर्मी महसुुस गरे । तर तापक्रमको घटबढमा भने कुनै परिवर्तन आएन । तापक्रम स्थिर नै थियो । प्रसस्त मात्रामा जलवाष्प वायुमण्डलमा पुगेपछि त्यो बादल बन्यो । “तातो र चिसोको एकैपटकको मेलले त्यहाँ उथलपुथल पैदा भयो र बादलभित्रै संघर्ष चल्न थाल्यो,” चट्याङविद् शर्माले भन्नुभयो ।
त्यहाँ नेगेटिभ र पोजेटिभ चार्ज पैदा हुँदा आपसमै टकराउन थाल्यो । चिसो बरफ र तातो वाफको संघर्ष निरन्तर हुँदा करेन्ट प्रवाह भएर चट्याङ पर्दाको अवस्थामा झैँ बिजुली चम्कन थाल्यो । तर त्यो बिजुली चट्याङ बनेर जमिनमा झरेन । बादलभित्रै एकअर्कामा चट्याङमा पर्यो ।
जमिनमा चट्याङ पर्दा जमिनमा रहेको पोजेटिभ वा नेगेटिभ इनर्जीसँग बादलको पोजेटिभ वा नेगेटिभ इनर्जी ठोकिन्थ्यो र आवाज सहित चट्याङ पथ्र्यो । तर माथिल्लो वायुमण्डलको वादलभित्रभित्रै यो प्रक्रिया भएकाले आवाज जमिनमा आइनपुगेको शर्माले बताउनुभयो ।
अरुबेला जमिन र आकाशको पोजेटिभ नेगेटिभ इनर्जी ठोक्किएको केही क्षणमै बर्षा हुन्थ्यो । तर आकाशमा भएको बादलको संघर्षमा समुद्रको जलवाष्प थिएन । जसका कारण स्थानीय रुपमै बनेको बादलको त्यो संघर्षले आकाशमा रहेको चिसो बादल र जमिनबाट गएको तातो वाष्पबीच घर्षण हुन लामो समय लाग्यो ।
आक्कलझुक्कल देखिने यो चट्याङ बढिजसो पृथ्वीको भूमध्यरेखीय क्षेत्रमा देखिन्छ । अन्यत्र भने अचानक बढेको सापेक्षित आद्रताका कारण कहिलेकाँही देखिन्छ ।सक्रिय मनसुनको गति न्यून हुँदै गर्दा नेपालका अचानक बढेको तातोका कारण यस्तो अवस्था आएको हो । बादलभित्रको बरफ र पानीको कणमा उत्पन्न उर्जाको संघर्षपछि यो सन्तुलनमा आउँछ । त्यसपछि बर्षा हुन्छ । सोही अनुसार काठमाडौँ उपत्यका सहित अन्य केही स्थानमा रातमा झरी परेको थियो ।
(चाँदनी हमालले गोरखापत्र अनलाइनमा लेखेको यो समाचार हामीले साभार गरेका हौ)
Prevकोरोनाका बिरामीले भरिएको अस्पतालमा आज अचानक भयानक आगलागी, ८ जनाको मृ त्यु
Nextअध्यक्ष प्रचण्डको सुरक्षामा खटिएका ६ जना सुरक्षाकर्मीमा कोरोना संक्रमण
काठमाडौंको जग्गाको मूल्याङ्कन बढेन, ललितपुरमा प्रति आना १२ सय !
भोलिदेखि हिँडडुल गर्न समेत रोक (7152)
नेपालमा पनि यति गते बाट टिकटक बन्द हुदै (3279)
यी हुन् कलेजो बिग्रिएको थाहा पाउने ५ संकेत ! (1756)
काठमाडौँको एक निजि अस्पतालमा कोरोना संक्रमितलाई १२ दिन राखेको बिल आयो २६ लाख तर बाचेन बिरामी, पैसा दिएपछि मात्रै सेनाले शव लैजान पायो (1146)
काठमाडौंको जग्गाको मूल्याङ्कन बढेन, ललितपुरमा प्रति आना १२ सय ! (1100)